China Cleaner Akwụkwọ Recycling Machine Middle Low Consistency Cleaner pulp Cleaner factory na ndị na-ebu ya | YUNFENG
Cleaner Akwụkwọ Recycling Machine Middle Low Consistency Cleaner pulp Cleaner
Middle Consistency Cleaner bụ otu n'ime ihe ndị dị elu akụrụngwa nhicha akụrụngwa, ọkacha mma akwụkwọ nhicha ka mma, ihe mkpofu akwụkwọ dị mkpa. Equipment iji “ejula ijeụkwụ” n’ime pulp, n'ụzọ zuru ezu dozie Cleaner Cleaner slurry n’ime slurry ugboelu iyi nnyonye anya drawback, slag hụ ezigbo mmetụta, ma na-ebelata nsogbu ọnwụ. Onye na-ehichapụ ihe eji eme ihe na-eji obosara eme ihe, ma maka akwa pulp na-ehicha tupu machi ...
Middle Consistency Cleaner bụ otu n'ime ihe ndị dị elu akụrụngwa nhicha akụrụngwa, ọkacha mma akwụkwọ nhicha ka mma, ihe mkpofu akwụkwọ dị mkpa. Akụrụngwa na-eji "ọsọ nke snail" n'ime pulp, dozie nsogbu Cleaner Cleaner slurry n'ime slurry jet iyi nnyonye anya drawback, slag hụ ezigbo mmetụta, ma na-ebelata nsogbu ọnwụ.
Middle Consistency Cleaner iji obosara, ma maka akwa anọgidesi pulp roughing kpochara tupu igwe nwekwara ike-eji maka nhọrọ nke a ala ịta pulp ọcha.
A na-ejikarị nhicha pulp ewepụ ihe ndị na-adịghị ọcha dị ka ígwè, ntu akwụkwọ, ash, ájá na iko iko agbajiri agbaji wdg. Ọ nwere ike belata nkedo nke ịgbaso ngwa ọrụ ma melite ogo nke eriri. Ọ bụ akụrụngwa bụ isi nke ịmegharị akwụkwọ mkpofu, iji ojiji ya na oke nke adịghị ọcha, ma mee ka adịghị ọcha dị iche na-ewepụ ya na pulp, mezuo ebumnuche nke ikpocha pulp.
etinyere iji wepu ụdị adịghị ọcha niile dị na mpempe akwụkwọ, dị ka staples, nkume, iko, wdg.
Ulo na-abanye n'ime ụlọ
Ike eddy ike
O doro anya na ala nsogbu mpaghara subarea
Nke a na-eme ka nnabata na adịghị ọcha iche iche nke ọma.
Eyi eguzogide ceramik cone, ogologo ọrụ ndụ.
Akpan e ogologo cone nwere obere taper n'akuku na ezi ihicha arụmọrụ.
Akụrụngwa ya na PLC na-achịkwa kọfị, dị mma ma dịkwa mfe ijikwa, oke adịghị ọcha.
Na-etinye aka na mbupu akpaka na-aga n'ihu
Na-aga n'ihu na-emeghe slag orùrù.
HT usoro dị elu na-ehicha ihe dị elu nwere ike iwepụ adịghị ọcha buru ibu karịa 3mm na dayameta site na ngwaahịa akwụkwọ echegharị.
Dị ka ngwa nyocha nyocha, ọ na-abụkarị ihe eji arụ ọrụ nke hydrapulper. Enwere ike itinye ya dị ka akụrụngwa dị mkpa
iji hụ na ọrụ nke ala-iyi nhazi equipments.
Nke gara aga: 350 Pulp Cleaner maka Akwụkwọ mkpofu Akwụkwọ
Osote: Igwe anaghị agba nchara 304 elu njupụta Cleaner akwụkwọ na nkume igwe nri elu njupụta Cleaner akwụkwọ Ndinam igwe price
Waste Akwụkwọ pulp Machine Low njupụta Cleaner N'ihi Akwụkwọ Ime